पिङ खेल्दा किन लाग्छ रिंगाटा ? कारण यस्तो - Gokarna News from Nepal
पिङ खेल्दा किन लाग्छ रिंगाटा ? कारण यस्तो
काठमाडौं– हिन्दू नेपालीहरुको महान चाड दशैको माहोला चलिरहेको छ । दशैमा टिका टालो र खानपान सहित पिङको मजामा झुल्ने मानिसहरु धेरै हुन्छन् ।
तपाईहरुलाई पनि पिङ खेल्न मन पर्छ होला । पिङ खेल्दा रमाइलो मात्रै हुँदैन स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । दशैको समयमा धेरै मासु लगायत विभिन्न परिकार खाइने हुदा पिङ खेल्दा शरीरले कसरत पाउँछ र खाएका खानेकुरा पचाउन सहयोग गर्छ । पिङले सबैलाई फाइदा भने गर्दैन । केही व्यक्तिहरुलाई पिङमा केही समय मच्चिने वित्तिकै रिंगाटा लाग्ने समस्या हुन्छ । पिङ खेल्दा किन रिंगाटा लाग्छ हामी तपाईलाई यसबारे जानकारी दिदैछौं ।
–पिङमा मच्चिदा मुटुको धड्कन असामान्य हुँदा रिंगाटा लाग्छ,